''မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးထွက်တာကြောင့် အရမ်းကိုဂုဏ်ယူတယ်'' ဆိုတဲ့ မေသက်ထားဆွေ - Yangon Media Group
မြန်မာစာနှင့် ဇီဝဗေဒဘာသာရပ် ဂုဏ်ထူး နှစ်ဘာသာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ မေသက်ထားဆွေအနေနဲ့ မြန်မာစာက ခက် တာကြောင့် မြန်မာစာဂုဏ်ထူးထွက်လို့ အရမ်းဂုဏ်ယူပါ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
”ညီမကစာမေးပွဲ စဖြေကတည်းက ဘာသာစုံတော့ မမှန်းပါဘူး။ လေးဘာသာလောက် ဂုဏ်ထူးထွက်မယ်လို့တော့ မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ဘာသာပဲဖြစ်သွားတယ် ဆိုပေ မယ့်လည်းကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ မြန်မာစာက ခက်တာကြောင့် အခုလိုမြန်မာစာဂုဏ်ထူးထွက်တာကြောင့်လည်း အရမ်းကို ဂုဏ်ယူတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကလည်း ဂုဏ်ယူကြပါ တယ်”လို့ဆိုပါတယ်။
သူမအနေနဲ့ ဆယ်တန်းတစ်နှစ်လုံးမှာ မိခင်ဖြစ်သူ ချ မှတ်ပေးထားတဲ့ အချိန်ဇယားနဲ့ နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း သိ ရပါတယ်။
”အမေက ညီမကို အိမ်မှာ တစ်နေ့တာ အချိန်ဇယား လေးဆွဲပေးထားပါတယ်။ မနက် ၅ နာရီကနေ ည ၁ဝ နာရီ အထိ အချိန်ဆွဲပေးထားတယ်။ အဲဒီအချိန်တွေထဲမှာ အနား ယူတဲ့ အချိန်တွေရော ကျူရှင်ချိန်တွေရော ဘုရားရှိခိုးတဲ့ အချိန် တွေ ပါပါတယ်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အဲဒီအချိန် ဇယားအတိုင်းပဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မေမေက ညီမကိုကျန်းမာရေးရော အခြား စိတ်ကိုအားပေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုပါ အများကြီးလုပ်ပေးပါ တယ်”လို့ ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဘုရား တရားပြုလုပ်ခြင်းက ကိုယ်ကြိုးစားနေတဲ့ အရာ များကို ပိုပြီးထိရောက်တယ်လို့ ထင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပုတီးစိတ်တာနှင့် ပဋ္ဌာန်းရွတ်တာကို လုပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
”ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း ညီမအရင်တုန်းကအတိုင်းပဲ အနုပညာအလုပ်တွေကိုရော ကျောင်းပညာရေးပိုင်းကိုပါ နှစ်ခုစလုံးကို မျှမျှတတဖြစ်အောင် လုပ် သွားမယ်။ အနုပညာကိုလည်း ကြိုး စားပြီး သင်ယူမယ်။ ဂီတလမ်း ကြောင်းကို လျှောက်မယ်။ တစ် ဖက်မှာလည်း ကျောင်းဆက် တက်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါ တယ်။ ဂီတအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့လည်း လုပ်မယ့် အရာလေးတွေ စဉ်းစား ထားတာ ရှိပါတယ်။ ညီမကို ဆုတောင်းပေး ကြတဲ့၊ စောင့်ပြီး တော့ ဂုဏ်ပြု ပေးကြတဲ့ ပရိ သတ်တွေကို လည်း အရမ်း ကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်”လို့ ဆက် လက်ပြောပြခဲ့ပါ တယ်။
'အဖေ့ရဲ့ တတ်တဲ့ပညာနဲ့ သမီးကို ပညာတတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် သမီး တတ်တဲ့ပညာနဲ့လ??
Miss Myanmar International 2019 အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲ ပြုလုပ်ရန် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များတွင် ကိုယ်စားပြုအလှမယ်မျာ?
မြင့်ဆွေကို ဖျောက်ဖျက်နေခြင်းအတွက် အလွန် အံ့သြကြောင်း ဇေယျာဖြိုး ပြော
စစ်မှုထမ်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့်မင်းသား ကင်ဆိုယောင်းကို ပရိသတ် ၃ဝဝ ကျော် ကြိုဆို